I-SlayerAI: Ukunquma Amagama Amaningi Ahlukene Okudingayo Ukuze Uwine | Martech Zone
NgoLwesibili, Januwari 18, 2022 NgoLwesibili, Januwari 18, 2022 Douglas Karr
Ngokwesilinganiso, ezinhlanu izikhathi lapho abantu abaningi befunda isihloko njenge funda ikhophi yomzimba. Uma usubhale isihloko sakho, ususebenzise amasenti angamashumi ayisishiyagalombili edoleni lakho.
UDavid Ogilvy, I-Ogilvy ekukhangiseni
USlayer uwubuhlakani bokwenziwa (AI) umkhiqizo obikezela ukuthi isihloko siheha kangakanani izethameli ezithile. Isibonelo, iyaqonda ukuthi i-denim ama-daisy dukes kukhona 15% ngaphezulu ukuzibandakanya kunedenim izikhindi ezimfishane emakethe yemfashini. I-Slayer icubungula umbhalo ngokusekelwe lapho ikhophi izovela khona, ikunikeza imiphumela elungiselelwe ukukhulisa impumelelo kuzithameli zakho. I-AI isebenza ngokuhlaziya izinkulungwane zemikhankaso yangaphambilini nemibhalo, kanye nempumelelo yayo. Ibe isiqeqeshelwa ukubona ukuthi umbhalo uyaheha noma cha.
Isibonelo esisodwa sokuthi i-Slayer isetshenziswa kanjani ukuthuthukisa ukuthinta kwamakhasimende 30% inkampani ehweba esidlangalaleni ye-cybersecurity, I-OneSpan. I-OneSpan isebenzise i-Slayer ukuze ithuthukise imigqa yezihloko ze-imeyili ngokukhomba imvume eheha kakhulu:
Kungani i-SlayerAI ibalulekile?
Kule minyaka emi-3 edlule inani lekhophi elikhiqizwayo liye laba nalo inyuke ngo-10x ngaphezulu.
Usayizi weMakethe Yokudala Okuqukethwe Kwedijithali kulindeleke ukuthi ufinyelele ku-$38.2 billion ngo-2030 ku-CAGR ka-12% phakathi kuka-2020 no-2030. ngesikhathi sokubikezela.
I-InsightSLICE, Imakethe Yokudala Okuqukethwe Kwedijithali
Lokhu kukhula kugqugquzelwe izici ezimbalwa - ukukhula okwandayo ekuhwebeni kwe-inthanethi, ukwanda kwabasebenzisi abasha abaza ku-inthanethi okokuqala ngqa, kanye nekhono lokudala ikhophi nge-AI.
Kunethalente namathuluzi amaningi kunangaphambili okudala okuqukethwe, futhi ukushintshela ekuhwebeni kwe-inthanethi kukhulisa isidingo samakhophi… futhi siya ngokuba sikhulu.
I-SlayerAI ikunikeza ikhono lokuthintana nezithameli zakho olwandle lokuqukethwe okukhiqizwa ngokushibhile. Ngalokhu, ukuxhumana okukhulu kuba amandla amakhulu. Ukugqama ngekhophi yakho, kuthatha okungaphezu nje kokuqinisekisa ukuthi unolimi olufanele nesipelingi, noma ukulandela nje imikhuba emihle yokuthengisa, ngoba ukuphela komdlalo kumayelana nokukwazi ukuhlangana nezithameli zakho ku-niche yazo.
Njengamanje, inkinga yokungakhulumisani kahle ixazululwa ngokungenelela okwenziwa ngesandla (isb., umhleli ongumuntu) kanye nokusetshenziswa kwamathuluzi esoftware athile azokunikeza izimiso ezijwayelekile (i-Grammarly idume kakhulu). Nakuba abahleli abangabantu bengaba bahle futhi baqonde ngqo, ukuthola umkopishi okhethekile kungabiza futhi kunomsebenzi omningi kuphela abangawenza.
I-SlayerAI ingumsizi okahle, ikakhulukazi uma inhloso kuwukuba imikhankaso yakho yokumaketha isebenze kahle, ngokungaguquki.
Ubani uSlayerAI amlungele?
I-SlayerAI iyithuluzi elihle kunoma ngubani obhala ikhophi ku-inthanethi. Njengamanje, abasebenzisi be-Slayer bahlanganisa amabhizinisi amakhulu, amabhizinisi amancane, ama-ejensi wokumaketha, nabakopishi abazisebenzelayo ngabanye.
I-AI imahhala ukuthi isetshenziswe isikhathi esilinganiselwe, futhi ingasiza ngokushesha ukuthuthukisa okuqukethwe, ngaphezu koku:
Ukwenza amaviki okuhlolwa kwe-A/B ngemizuzu esikhundleni sezinyanga
Ukuhlola ukupela ngomthelela, esikhundleni sohlelo lolimi
Ukulawulwa kwekhwalithi okusheshayo kubakopishi abancane
Isihluthulelo sokubhala ikhophi enhle ukunquma ukuthi izethameli zakho zifunani kuqala, bese ufaka uphawu lwakho. Kungakho u-Slayer edale ikhono lokukhetha kunqwaba yezethameli eziqondiwe; kusukela kubantu abathanda i-crypto, kuya kulabo abathanda imfashini, ubuhle, ukufaneleka, izimoto, ukulungiswa kwekhaya nokunye.
I-AI yethu ihlolwe kakhulu neqembu elincane labasebenzisi be-beta, futhi imiphumela ibe yisimanga. Ukuthi bekusiza ekuqaleni ukwandisa amazinga okuvula kusuka ku-12% kuya ku-19%, noma ukusiza i-ejensi yokumaketha ukuthi ikhule ngokubavumela ukuthi bachithe isikhathi esincane behlola umsebenzi wabo.
Ufuna ukubhala izihloko zewebhusayithi ezingcono, izihloko zezihloko, izihloko zamabhulogi, ikhophi yesikhangiso, okuthunyelwe komphakathi kanye ne-SMS? U-Slayer ukumboze kuzo zonke izinhlangothi.
Isebenza kanjani i-SlayerAI?
Ukusebenzisa i-Slayer kulula, vele ubhalisele i-akhawunti yamahhala, ngena ngemvume, bese:
Khetha izethameli oziqondise
Faka ikhophi ongathanda ukuyithola, bese ukhetha ukuthi ungathanda yini iziphakamiso
Yilokho kuphela! Uma ungaziboni izithameli zakho ezifanele, ungacela entsha kithi usebenzisa okwehlayo kwesokunxele sewebhusayithi.
Isikolo osibonayo singamaphesenti wamathuba okuthi umbhalo wakho uhehe kakhulu. I-AI inembe ngo-80%+, okusho ukuthi izihloko zakho zezindaba manje zizodonsa amehlo abafundi bakho abayigugu kaningi.
Kwenzekani uma uba negciwane?
Ukunikeza umkhiqizo noma isevisi yakho ithuba elingcono kakhulu lokungenwa yigciwane kungashintsha ingcebo yenkampani yakho kakhulu. Kungumehluko phakathi konyaka wokuthengisa amarekhodi nokugcina isimo sikhona.
Ithuba lakho elingcono kakhulu lokukhula nokuba negciwane usebenzisa i-SlayerAI ukuze uqinisekise ukuthi uyisebenzisa ngokugcwele imizamo yakho yokumaketha. Bhalisa manje futhi uthole amaviki angu-2 e-SlayerAI mahhala ngokuphelele!
Bhalisela Isivivinyo se-SlayerAI
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami zobulungu ze-Amazon kanye SlayerAI kulesi sihloko.
Tags: ikhophi yesikhangisoaiisilinganiso sokuchofozaUkukhangisa Okuqukethweukwenziwa kokuqukethwectrimeyili evulekile amazingaimeyili isihloko nokwenza kahlenokwenza kahle kwesihlokoizihlokokhuphula i-ad ctrukwandisa izinga lokuchofozakhuphula amanani avuliwe e-imeyiliukwandisa amanani avulekileukuthuthukisa izihloko zezindabaumbulalinokwenza kahle komugqa wesihloko
Ungakuhlanganisa Kanjani Okuthunyelwe Nezinhlobo Zokuthunyelwe Ngokwezifiso Kumibuzo Ye-WordPress kanye Nokuphakelayo kwe-RSS